Blue zircon maka mgbanaka, olu olu na ọla ntị - Blue zircon meaning - video
Blue zircon pụtara: nkume anụnụ anụnụ na-egbuke egbuke maka ọla, a na-ejikarị mgbanaka, olu na ọla ntị. Ọ bụ onyinye zuru oke dịka mgbanyere aka etinye na edo edo.
Enwere obere agba nkume nke na-acha anụnụ anụnụ nke jikọtara ma ike na gloss. Sapphire bụ onye a ma ama. Topaz topa bụ ihe kachasị achacha acha anụnụ anụnụ, ụcha na-abịa site na irradiation nke topaz na-enweghị atụ, ọ na-enwekarị ebe mara mma ma na-achọta ụda ọkụ, na-ajụkwa na ọchịchịrị. Nhọrọ ndị ọzọ nke nkume dị egwu, gụnyere tanzanite (blue-violet) na aquamarine (acha anụnụ anụnụ). A na-achọta elekere na-agagharị na Tourmaline na spinel n'oge ụfọdụ, ma ọ dịkarịghị.
Nkume na-acha anụnụ anụnụ
zircon bụ nkume na-acha anụnụ anụnụ nke na-egbukepụ egbuke egbuke, ihe ndeputa ya dị elu karịa sapphire, tanzanite na spinel. Ma zircon bụ ndị ọha na eze ghọtara nke ọma, bụ nke nwere ike mgbagwoju anya na cubic zirconia, nkume artifici a na-agbazi nkume diamond. Zircon bụ ihe ịnweta anụ ahụ, Anyị nwere ike ịchọta zirconium silicate na agba nile nke zircon, gụnyere agba chaa chaa.
Blue zircon bụ agba kachasị ewu ewu. Agba na-acha anụnụ anụnụ bụ nsonaazụ nke ọgwụgwọ ọkụ nke zircon brown. Ma agba aja aja niile anaghị acha anụnụ anụnụ mgbe a na-ewe iwe dị ọkụ, ọ bụ naanị ole na ole zircons nwere ikike nke anụ ahụ na-acha anụnụ anụnụ mgbe a na-ewe iwe dị ọkụ. Ọ bụ ya mere ọtụtụ nkume ji esi na Cambodia.
Brown zircon na-agbanwe na-acha anụnụ anụnụ mgbe ọgwụgwọ okpomọkụ
Nkọwa mara mma
Ezi zircon bụ mineral nke otu nesosilicates nwere. Aha kemịkal ya bụ zirconium silicate yana usoro kemịkal ya kwekọrọ bụ ZrSiO4. Irdị zircon na silicate gbazere na nnukwu oke ike dị n'ọhịa na-ekwekọghị. Dịka ọmụmaatụ, hafnium fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na ọnụọgụ sitere na 1 ruo 4%. Ihe owuwu kristal nke zircon bụ usoro kristal tetragonal.
Zircon bụ ebe niile na ụwa. Ọ na-eme dị ka ihe ịnweta ịnweta ngwa ngwa na nkume dị egwu, dịka ihe ndị bụ isi na-emepụta nsị, na nkume ndị na-edozi ahụ nakwa dịka ihe ndị na-emepụta ihe na nkume na-edozi ahụ. Nnukwu kristal zircon bụ obere. Mpempe akwụkwọ ha dị na granite bụ banyere 0.1 ka 0.3 mm, ma ha nwekwara ike ịbawanye ogo nke ọtụtụ centimeters, karịsịa na peficmatites na carbonatites.
Ụcha nke zircon dị iche n'agbata ụcha, na-acha edo edo, ọbara ọbara, aja aja, acha anụnụ anụnụ, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ụfọdụ ndị ahịa na-atụgharị anya na-akpọ "Matura diamond" ihe atụ na-enweghị atụ nke zircon. Ndị Cambodia na-ekwukwa banyere "diamond Pailin". Ịmara na ọ dịghị diamond dị na Cambodia. Pailin bụ aha nke ógbè dị na Cambodia, ókè nke ala na Thailand.
Blue zircon pụtara na atụmatụ ihe atụ
Ihe omumu omumu ozo nke abali Disemba
Ihe nke zircon acha anụnụ anụnụ na-ehichapụ uche gị. Dị ka akụkụ nke uru ya, nkume a bara nnukwu uru na-eweghachi ịdị ọcha gị. Ọ na-agwọ ume gị nke na-enweghị ike site na nrụgide dị iche iche. Ọ dị mma iji mgbe ị chere na ịnwere ọtụtụ ike na-adịghị mma n'ime gị ma ọ bụ ọ bụrụ na onwe gị tụkwasịrị onwe gị.
Zoro zircon si Ratanakiri, Cambodia
Anyị mere ọla edo edo, dịka ọmụmaatụ: mgbanaka zircon, olu olu, ọla ntị…
zụta zircon zircon na ụlọ ahịa anyị
Pink zircon, si Tanzania
Zircons, site Sri Lanka